ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာပြည်အင်တာနက် ဆိုးရွားနိမ့်ကျနေဆဲ၊ အစိုးရရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေရှိဟု ဝေဖန်ပြောဆို (ရုပ်သံ)
မြန်မာပြည်အင်တာနက် ဆိုးရွားနိမ့်ကျနေဆဲ၊ အစိုးရရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေရှိဟု ဝေဖန်ပြောဆို (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:47 PM
အစိုးရတစ်ခုရဲ. ပြည်သူတွေအပေါ် ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှု
နဲ. တိုင်းပြည်ရဲ.အင်တာနက် မြန်နှုန်း နှေးကွေးမှု ဟာ တိုက်ရိုက်အချိုး